Mpitarika Vaovao Ho An’ny Mpilalao Cricket West Indies · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2013 11:30 GMT
Nampahafantarin'ny Komitin'ny mpitantana ny lalao Criket any Indies Andrefana ny ekipany ho any amin'ny Champions Trophy an'ny Filankevitra Iraisam-pirenena ho an'ny lalao Cricket (ICC) , saingy izay tena maresaka ao amin'ny faritra dia ny fanapahan-kevitra hanoloana an'ilay St. Lucian Darren Sammy amin'i Dwayne Bravo teraka tany Trinidad ho mpitarika ilay ekipan'ny Andro Iray Iraisam-pirenenane – One Day International (ODI).
Nanontany tena ny amin'izay ao ambadik'ilay fanapahan-kevitra i Shaka O'Neal , tao amin'ny Facebook-n'ny Fivondronan'ny Mpankafy ny Criket any Indies Andrefana (West Indies Cricket Fans Association – WICFA):
Ahoana no hanamarinanao ny fanesorana (sento kely) ny fitarihana ny ekipa tamin'i Sammy aminà “overs” voafetra, 50 overs, fa amiko ny fitànana azy amin'ny 20/20 sy ny fitsapàna atao tsy misy dikany .
Azon'i Ezra Hinds ny antony saingy tsy fantany izay dikan'ilay fanendrena manokana :
Ankasitrahako ny fanoloana an'i Sammy amin'ny fitarihana io ODI io satria efa ela aho no nilaza fa tsara raha olon-kafa indray no hofanina amin'io endri-dalao io. Very ny lanjan'ny lalao cricket ODI. Hitako fa miha-resy tsikelikely izy io, noho izany tsy dia ampiasàna saina loatra.
Ny olana amiko izao dia ny fahambanian'ny herin-tsaina takiana handraisana an'i DJ Bravo ho mpitarika ny ekipan'i WI. Tena manantena aho fa hisy fahatsorana hiantso azy mandritra ny fihodinana atao amin'ny faran'ny taona ary manantena aho fa tsy hiverina haka io toerana io intsony i Sammy. Tsy ratsy akory ny nataontsika tamin'ny fotoana nitarihan'i Sammy ny ekipa ary mampalahelo raha izany no lazaina fa antony nanoloana azy.
Nanontany tena i Randy Wilson izay hisolo vaika ny ankalana raha toa ka resy eo ny ekipa :
Tsy mpitarika ny ekipa intsony i Sammy (sento kely) ka iza no hofidian'ny vahoaka. Rehefa hanomboka ho resy ny wi, tsy hampiditra an’i Dr Smith ho ao anatin'ny ekipa akory [ry zareo]. Tena heveriko fa tsy ny fitarihan'i Sammy ny ekipa Wi no olana, ny fiarahana sy ny vokatra no olan'ny wi. [Manantena] aho…fa ho disoan'ny wi [amin'io ] fifanintsanana io [ary] handresy izy amin'ny lalao famaranana. Nametraka ny fototra ny fitarihan'i Sammy ny ekipa (sento kely) ary mpitarika iray hafa no hanangana. Namela ohatra [tsara] ho an'ny wi i Sammy (sento kely)- ilay fomba fisaina tsy mitsoaka an-daharana – ankehitriny mpitarika iray hafa no mitondra, angamba hitndra ny wi lavidavitra kokoa. Manantena ny tsara ho an'ny wi aho [ary] hitondra fandresena roa anatinà fihodinana iray ao amin'ny kabinetran'ny wi.
Tsy hitan'i Sunil Asokan izay ilàna ny fanoloana mpitarika amin'izao fotoana izao:
Tsy hitako izay tanjon'ilay fanoloana mpitarika. Araka ny fihevitro, mitondra tombony kokoa i Sammy ho an'ny ekipa voafetran'ny “overs” taha ny ataony ao amin'ny ekipan'ny Fitsapàna. Noho izany amiko dia safidy mandeha ho azy izy amin'ny karazan-dalao “overs” voafetra (izy roa). Nitondra ny ekipa tany amin'ny amboara eran-tany io lehilahy io. Tsy manana olana aminy aho amin'ny resaka fandaminana paika. Misy ny zavatra kely tsy tiako etsy sy eroa nefa tsy ataoko mahatezitra. Raha mamorona ekipa izy, dia tokony hotarihany faran'izay lavitra tratra raha ny fijeriko manokana.
Tsapan'i David Springer fa fitiavan-tanindrazana sy maha-nosy no ao ambadik'io fanapahan-kevitra io :
Tsy gaga amin'izany aho, nilalao tsara ny trinis. Manana mpitarika izay ny ao anatiny dia handà ny andraikiny ao amin'ny WI isika ary eo am-pilalaovana dia any amin'ny IPL [Indian Premier League] ny fony ary rehefa mody izy dia hilaza fa reraky ny asa tao amin'ny WI. Ny tena izy izany amin'izao dia ny iray amin'ireo mpiady tranainy no ananantsika, izay nankasitraka ny tsy fisian'ny maha-matianina sy tsy nitondra antsika nankaiza niaraka tamin'ireo miaramilany. I Chanderpau ihany no olona tsy eo nefa azo antsoina ihany koa. Manomboka ny fitontongan'ny herin'ny ekipan'ny Wi amin'ny cricket. Amin'ny manaraka ny fanesorana an'i Sammy amin'ny fitarihana ny ekipa fitsapàna izay hiafara amin'ny fialàn'i Gibson an-tsitrapo tsy ho mpanazatra intsony.
Nandritra izany fotoana izany, tao amin'ny Facebook-n'ny vondron'ny Saint Lucians Mikendry ny Fandrosoana -Saint Lucians Aiming for Progress (S.L.A.P),dia noheverin'i Wendy Michael fa angamba ho amin'ny tsara kokoa io fanapahan-kevitra io :
Ny lafy tsarany dia tsy mitondra intsony eo an-tsorony (sento kely) ny vesatry ny tontolo sy izay andrasan'ny olona izy ; tsy zavatra mora izany. tsy azo omena tsiny noho ny fanjombonan'ny andro izy, na ny tsy fahavitrihan'ireo mpilalao na ny rivotra mitsoka mandeha lalàn-kafa !
Farany, notsindrian’ i Simeon Christophe fa nahavita niasa tsara teo ambany tsindry i Sammy :
Hitanareo izao ny fitsikeran'ny olona an'i Sammy hatramin'ny andro voalohany, sy ny fiahiahian'izy ireo momba ny fahaizany mitarika sy maha-mpilalao azy, nefa hatrany hatrany dia noporofoiny, tsy rototra izy ary nanao ny asany tsara. Tsy mora ny mikarakara ny lakozia atao hoe lalao cricket ao Indies Andrefana ary tsy misy afa-tsy ny mpahandro mendrika ihany no afaka mahazaka ny hafanana. Nahasedra ny fotoana i Sammy raha ny fijeriko manokana. Izao hatrany no fitenin'ny reniko, lava noho ny tady ny fotoana. Zavatra tokana no azo antoka, mbola hilalao cricket foana i Sammy tahaka izay efa nataony fony izy notsikerain'ny rehetra, na ny teto an-toerana na ny iraisam-pirenena, ny mpilalao ka hatramin'ny haino aman-jery ofisialy sy ny mpanohana. Mino aho ankehitriny fa misalasala ny amin'io fanapahan-kevitra io ireo mpitsikera fahiny satria noporofoin'i Sammy ny maha-mpitarika azy nandritra izay fotoana izay. Omeo azy izay tokony ho azy.
Avy amin'ny the_junes ny sary “Dwayne Bravo” ampiasaina amin'ity lahatsoratra ity, alàlana Attribution-NonCommercial 2.0 Generic Creative Commons license. Tsidiho ny fifandimbiasan-tsary flickr the_junes.